Ibhinqa liyakwazi ukunyamezela kwaye libele umntwana onempilo kwiminyaka engama-30 neye-35 nangaphezulu. Isiphambili sempumelelo yimpilo kamama kunye nokuthotyelwa ngeengcebiso zogqirha onobulumko.
Ukulungela ukuzalwa komntwana uneminyaka yobudala ukususela kwiminyaka engama-20 ukuya kwe-28. Ngeli xesha, umzimba wesetyhini ulungelelwe ngakumbi umsebenzi wokuthwala, ukuzala nokulondla umntwana. Nangona kunjalo, kwiminyaka yakutshanje, abafazi abahlehlisela ukuzalwa komntwana kamva, kuya kuba ngakumbi. Okokuqala, - bathetha, - kufuneka ufumane imfundo ephakamileyo, uphumelele kwiindawo eziphakamileyo kumsebenzi wakho, ukufezekisa izinto eziphathekayo, uze ucinge nje ngabantwana. Zonke ezi zihlandlo zengqiqo zikhokelela ekubeni ukuzalwa kwamazibulo kuhleliwe emva kweminyaka engama-30. Ukuba ngaba besetyhini bangaphambili babeletha ozelwe ngowama-30 kwiminyaka engama-30, babizwa ngokuba yiminyaka yobudala, njengamanje oomama abaselula bayasondela kwimashumi amane-engavamile. Nangona izazi zenzululwazi zaseMelika zibalwe ukuba iminyaka evulekileyo yokuzalwa kwezibulo ngoku iyakwanda ukuya kwiminyaka engama-34, oogqirha, ngokuqinisekileyo, abayithandabukeli ngale ndlela, ngenxa yokuba sonke sihlala singaphili kakuhle, ngokuphambene noko, kukho izifo ezingapheliyo, ukuzala kuyahla. Oku akusebenzi kubo bonke abafazi. Kwiimeko ezithile, ukukhulelwa emva kwexesha kunempawu zayo. Nangona kunjalo ukukhulelwa komfazi emva kweminyaka engamashumi amathathu-yintoni na? Ngoku siza kuzama ukuqonda oku ncinane. Kwaye kunokwenzeka ukuba ubuncinane intliziyo encinane elindele ukuzalwa kwayo iya kuba nethuba lokwenene lobomi.
Into ephambili - impilo
Iimeko ezihle kakhulu zokukhulelwa ngabo bafazi abaye bahlehlisa ngokukhawuleza ukuzalwa komntwana. Njengomthetho, bajonga impilo yabo, bazikhusele ngokufanelekileyo, kwaye baceba ukukhulelwa kwangaphambili kunye neqabane. Oogqirha bayaqiniseka ukuba xa umfazi ephethe kakubi impilo yakhe, akazange abe neengxaki zokungahambi kakuhle kwaye akazange akhiphe isisu, ukukhulelwa kwakhe emva kwemashumi amathathu kuya kuhlukahluka kokukhulelwa kwiminyaka eyi-25.
Inyaniso yokuba ibhinqa ilindile impilo yakhe, kodwa, ngelishwa, uMama usalawula apha. Ngoko, indalo ilungiselelwe njalo, ithuba lokukhulelwa emva kwemashumi amathathu liyancitshiswa ngokucacileyo. Kule minyaka, inani lezintlu ezinama-ovari linciphisa kubasetyhini, inani leentshukumo zonyango liyakhula. Ukukhulelwa kwebhere kwiqanda elichumayo liyancipha, kwaye akunakuhlala luhlala lukhuselekile. Ngoko ke, kufuneka ulungiselelwe ukuba ukuba ukhulelwe emva kweminyaka engamashumi amathathu ungadinga ixesha elingaphezulu kwama-20. Nangona awufumani yonke into ngokukhawuleza, khumbula ukuba unyango lwamanje lunesitokethi sezobugcisa kunye nobuchwepheshe obuvumela ukuba ukhulelwe, ulondoloze kwaye ukhusele ngokukhuselekileyo ukukhulelwa kumfazi malunga naluphi na ubudala.
Ukongezelela, inani lezitshintsho ze-chromosomal landa kunye nobudala. Ngoko umdala umfazi, kunokwenzeka ukuba unomntwana onenkinga yokuzalwa. Kodwa musa ukwesaba ngaphambi kwexesha. Ukuba akukho okanye wena umyeni unezifo ezizalwe ngumntu, ngaphandle kokuba wena ngokwakho unabathwali bezitho zomzimba, kwaye ukuba awunalo ukukhulelwa kwexesha elidlulileyo, amathuba okuba umntwana onempilo aphezulu. Kwimeko nayiphi na into, qhagamshelana nomfuzo ngaphambi kokuba ukhulelwe umntwana.
Xa uneminyaka yobudala, umngcipheko wokwakha ukukhulelwa kwexesha elide gestosis uyanda. Le ngxaki enzima yokukhulelwa. Mhlawumbi ugqirha uyakukunika umsebenzi wokulawula uxinzelelo lwegazi ekhaya. Kuya kuba lula ukukhusela okanye ukuqonda isifo.
Tune kwizinto ezilungileyo
Kwindoda ekhulelwe ngokukhawuleza, iziphakamiso eziqhelekileyo zifana nokufana noomama abasalindayo. Inyanga ngaphambi kokukhulelwa kunye neenyanga zokuqala zokukhulelwa, kuyafaneleka ukuthatha i-folic acid. Iyanciphisa umngcipheko wokuphuhlisa umonakalo kwinkqubo yenzwa emntwaneni. Mhlawumbi uya ku funeka uye kwintsebenziswano kunye nomthinteli-gynecologist kwaye uvavanyo. Kodwa akukho nto iphosakeleyo ngale nto, kwaye akufanele uyenqabe. Awunalo ilungelo lokubeka umngcipheko kwimpilo yengane yakho engakazalwa. Thembela ugqirha onolwazi, emva kwakho konke, injongo yakho kunye neyakho ngumama onempilo kunye nosana oluphilileyo.
Zama ukulungiselela umhla wakho ngokufanelekileyo. Yenza i-gymnastics kwabasetyhini abakhulelweyo, i-yoga, ibhukuda, hamba ngaphezulu emoyeni omtsha. Kufuneka udle kakuhle ekudleni kwakho, kufuneka ube nokutya okuqulethe zonke ii-microelements ezibalulekileyo kunye namavithamini, ngakumbi i-calcium, isinyithi, i-magnesium, i-vitamin D, i-E, C. Yiba nobuthongo obuhle, ubuthongo ubuncinane kwiiyure eziyi-8 ukuya kwemihla, uzame ukunika isahlulo seyure kwiyure ukuphumla kwemini. Eminye imizwa emihle, zama ukungaxhalabisi. Ukulinganisela kwengqondo kunye nesimo sengqondo esifanelekileyo sinokuqinisekisa ukuba unokunyamezela kwaye ubelethe umntwana omhle onempilo. Zilungise ngokwakho ukunyamezela ixesha elide lomntwana. Oku kuncedo kwimpilo yakho nakwimpilo yomntwana wakho.
Abasetyhini abaninzi banethemba lokuba ukukhulelwa emva kweminyaka engamashumi amathathu akunakuphela ekuzalweni kwemvelo. Kodwa oku kukukhohlisa! Ewe, kukho izibonakaliso zonyango malunga necandelo lekota, kodwa ubudala bomfazi abufaki kuloluhlu. Ukuba ulungile (ubukhulu beplavic, izikhombisi zengcinezelo yegazi, iziphumo zokuvavanya, inani leentliziyo zentsholongwane yakho, akukho zigulo ezinzulu) kwaye ugqirha wakho unxininisa ekunikweni kwezinto zendalo, ke ungayishiyi, ngenxa yokuba uyamoyika kwaye uyamoyika intlungu. Musa ukuwuthintela umntwana wakho wamava okuqala ehlabathini ukuba anqobe ubunzima, okuzalwa kuye. Oku kubaluleke kakhulu ekuphuhliseni umlingani womntwana kunye nophuhliso lobuntu bakhe. Kungcono ukubhalisa iikhosi kwabasetyhini abakhulelweyo, baya kukufundisa indlela yokuphefumula ngokuchanekileyo ekuzalweni, indlela yokunciphisa ukuvakalelwa okubuhlungu. Thatha ixesha lokuziqhelanisa imisipha yomzimba we-pelvic (i-Kegel umzimba) kunye nodonga lwangaphambili lwesisu.
Iinkqubo zokukhulelwa kokugqibela
Ngethuba lokukhulelwa, abaninzi abafazi baqhakazile oku ngenxa yokuveliswa kwemveliso yamabhinom eesini zesini - i-estrogens. Umfazi owabeletha umntwana osemva, ngoko uvakalelwa kwaye ukhangelelana kunontanga yakhe. Ukuqeda isiqhelo kwabesifazane abanjalo, njengomthetho, kuza emva koko kwaye kuqhubeka kulula kakhulu.
Umntwana osesikhatywayo uba ngumtsalane obalaseleyo kubazali babo ukuba babe nomzimba omzimba. Emva kwakho konke, inkunzi idinga ubaba osebenzayo kunye nonina, abathatha inxaxheba kumidlalo omnandi baze baphendule kuyo yonke into entsha.
Iminyaka yakho akufanele ibe yeso sizathu sokwenqabisa ulonwabo lomama. Kubaluleke ngakumbi kuneminyaka yobudala yakho yengqondo. Khumbula: umama ulonwabo, ngamanye amaxesha ungalindelekanga, ngamanye amaxesha ulinde ixesha elide.
Iiveki ezingama-40 zokukhulelwa, ukuqala komsebenzi
IiHormone - inxalenye ebalulekileyo kumama
I-Hemoglobin kwabasetyhini abakhulelweyo: indlela yokubuyisela emuva
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-22
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-25
Ndihlobo luni lwamanzi endingawasela ngalo kwabasetyhini abakhulelweyo nabamncelisayo?
Iintlobo kunye neengxaki zokukhulelwa kwezilwanyana ngokuphazamiseka ngokwesondo
Indlela yokusebenzisa i-mica kwizandiso zeetonki
Iphasika kunye nenkukhu kunye ne-broccoli
Yintoni eyenza iingxaki zesikhumba?
Uvuyo oluhle ngoSuku lweNtsapho kwindinyana, i-SMS kunye nemifanekiso yabamama, ootata, amadoda. Usuku lwentsapho kunye nothando - imbongi kunye neprose
Isikhwama seqela lokugqwesa kunye neengcamango zobuciko
Fritters nge burger
Izityalo, iivithamini, iiminerali ezixhamlayo, - isondlo esifanelekileyo
Uthando lweHoroscope ngo-2015 lwe-Aquarius
Ukuphulukisa iipropati zejisi yetamatato
Iipoktokhi zeakhukhi kunye neepokethi zekakhukhunathi
Senza ishedyuli yobuhle beveki